Ebla 08, 2019
Ijoollee koo sadan fi kan obboleettii koo tokko bishaanti darbanii yeroo ajjeesan biran ture kan Jettu Lidiyaan amma umriin ishee 46 ta’u dubbatti.Meencaan nama kukkutuu nuffanii bishaanti darbuu jalqaban. Dubartoota dhisaa jedhee Intarhamween ajaja waan kenneef nu dhiisan.
Sana booda irra deddebi’uun humnaan na gudeedanii warra Titsii fixnee jirra, sichii ijoollee warra Hutuu deessa jechuun na tuman.Firoota koo kan abbaa manaa koo waluumagala nama 73 na jalaa ajjeesan. Lidiyaan ergasii hin eerumne ijoollees hin godhanne.
Har’a garu hammam yoo ta’e kanneen yakka kana nu irratti gaggeessaniif dhiifama gochuu qabna kan jettu Lidiyaan haaloo fi dubbii garaatti baatanii ollaa waliin jiraachuun hin danda’amu. Kana malees haaloo fi jibbi dhukkuba dawaan hin fayyiifne nama keessatti uuma jetti.
Karrayyuu bonii itti jabaatee, wal dhabii daangaa itti dabalamee, namii akka hamaa jira artistootii Oromoo achi dhaqanilleen sunuma argan
Baaburri Meeshaa Fe'ee Finfinnee Irraa Gara Jibuutii Imalaa Ture Garagale
Dhimma Namoota Garee Maqaa Abbaa Torbee Jedhamuu Wajjin Wal-qabate Hidhamanii
Kitaabota 40 ol Barreessen Harkaa Qaba: Obbo Cherinnet Waaqwayyaa
‘Biyya Kanatti Rabbumti Nama Haa Eegu Malee Poolisiin Nama Eegu hin Danda’u’ Baqataa Oromoo Biyya Afriikaa Kibbaa Jiraat